I-intanethi kunye neeBlogs - ii-Geofumadas
iindlela kunye neengcebiso ze-Intanethi kunye neeblogi.
I-Kanbanflow - isicelo esihle sokulawula imisebenzi elindileyo
I-Kanbanflow, ithuluzi lokuvelisa, elingasetyenziselwa kwisiphequluli okanye kumadivayisi eselula, isetyenziswe ngokubanzi kwiintsebenziswano ezikude, oko kukuthi, uhlobo lokuzimela; kunye nemibutho okanye amaqela osebenzayo unokubona inkqubela phambili yemisebenzi yamalungu ayo onke. Ukuba u ...
ezintsha, Internet kunye neBlogs
Ukuqwalasela ukubaluleka kweesefowuni namhlanje kwimpilo yethu yemihla ngemihla, sivame ukunyamekela njengomntwana, ekuthengeni ukugubungela, iglasi elincinci lokukhusela isikrini, amacongci ngasemva ukuze abambelele kunye nabakhuseli amanzi xa kungenakubungqina bokuba ...
Izolo, ngo-11 ebusuku abazalwana bam bephuma beza kubhikisha, ndabatshela ukuba bakukholise ukuya kwindlu, kodwa udadewethu waphendula - ndiza kwenza ntoni endlini?, Ndilambile, into ephela efrijini ngamaqanda kunye Ukuba ndiyidla enye ndiyithatha isidlo sasemini somntu, ndiye ...
Internet kunye neBlogs, Izopolitiko kunye nentando yeninzi
Ukwenyuka okanye ukunganyani? Yintoni engcono ukubonisa iphrojekthi?
Indlela yokubonisa iiprojekthi sele iguqulwe inguqu ebalulekileyo, ngenxa yemigangatho yoshishino kunye nokusetyenziswa kobuchwepheshe obutsha. Kwaye kwakumbuzo wexesha ukuba le nkqubela ifikeleleke kwicandelo lezakhiwo. Bobabini inyaniso engakumbi kunye nobungqina beyona nto inika ithuba lokubonisa iiprojekthi ze ...
ezobugcisa zihambela phambili kuye kwenza abantu ukunxibelelana ukusuka naphi na, yaye ngokutsho izakhono zabo okanye imisebenzi ziziqhube zonke iintlobo kweenkonzo kumaqonga afana ndiyakuthanda, Workana okanye Fiver, abo bebaninzi malunga nokufumana kunye nokuthumela iintlawulo ngeendlela ezahlukeneyo. Kule nqaku ...
Ngokuqhelekileyo kuthiwa ixesha lokufunda likhululekile kakhulu kwaye lihle kakhulu kwixesha lobomi bomntu. Kulo xesha lobomi xa umntu ehlala engathandabuzekiyo, ngaphandle kokufuna ukuba acinge kakhulu ngomsebenzi ngaphandle kokukhathazeka ngekamva; ixesha lobomi xa ...
Ukukhetha uMboneleli weMeyili yeMisa - I-Personal Experience
Injongo yeyiphi na inkqubo yokuthengisa eyenza ukuba khona kwayo kwi-intanethi, ihlala ihlala kwaye iya kuba yenze ixabiso. Oku kusebenza kokubili kwinkampani enkulu ene-website, elindele ukuguqulela iindwendwe ekuthengiseni, kunye neblogi elindele ukuba ngabafundi abatsha kwaye bahlale bethembekile kwizinto ezikhoyo. Kwiimeko zombini, ...
4 Tips for impumelelo on Twitter - Top40 2015 Septemba Geospatial
I-Twitter yahlala ukuhlala, ngokukodwa ukuxhomekeka kokunyuka kwi-Intanethi ngabasebenzisi ngexesha lokusetyenziswa kwansuku zonke. Kulinganiselwa ukuba kwi-2020 i-80% yabasebenzisi baya kudibanisa kwi-intanethi kumadivayisi eselula. Kungakhathaliseki ukuba yintoni intsimi yakho, ukuba ungumphandi, umcebisi, umbonisi, usomashishini okanye ozimeleyo, ngolunye usuku ungazisola kungekhona ...
Geospatial - GIS, Internet kunye neBlogs
Inani elikhuni le-Top 40 Geospatial kwi-Twitter
Ngenye ixesha asizange sikholwe ukuba umsebenzi we-akhawunti ye-Twitter ingaba luleke kakhulu. Kodwa kwihlabathi apho sikhonyeliswa khona elwandle olumxholo, iiyure ezintathu zobomi be-Tuit ziba zikhangele ukuba zikhishwe ngendlela ehambelana nokukhetha abo babanikazi abamele ulwazi, ngaphezulu ...
Yintoni eyenzeka kwi-Top40 yeGeospatial kwi-Twitter
Kwiinyanga ezintandathu ezedlulileyo senze ukuhlaziywa kwama-akhawunti angama-twitter angama-40, ngaphakathi kwoluhlu esibizwa ngokuba yi-Top40. Namhlanje senza ukuhlaziywa kuleluhlu, ukubona ukuba kwenzekani phakathi kukaMeyi 22 kunye nokuphela kukaDisemba 22 we-2014. Kuzo zonke, ii-11 ziNgesi, zibini kwisiPutukezi kunye nezinye ...
UPSOCL - Indawo yokuphefumlelwa
Ingqamaniso yayo ilula, ngaphandle kwamacwecwe, ngaphandle kweentengiso, ifom yefowuni kunye nemenyu engabonakaliyo neendidi ezintlanu. Liyindawo yokuthetha isiSpanish i-UPSOCL, eyanikezelwa ukwabelana ngezinto ezibalulekileyo kwihlabathi. Izinto ezikhuthazayo, izinto ezinomdla, nezinto ezimele zibonwe. Yakho ...
I-Twitter ifike ekutshintsheni ininzi yokulandelela esiye sasiyenzayo ngokutya kwemveli. Akungabazeki ukuba kutheni le nto yenzeka, kodwa mhlawumbi esinye isizathu sisona siphumelelo sokwaphula iindaba ezivela kwi-mobile kunye nokuba kungenzeka ukuhlunga kwiintlobo ezibekele eceleni izinto ezingenasithakazelo. Ku ...
Phuma kakuhle Magazines egeomates My
Geospatial - GIS, Internet kunye neBlogs, egeomates My
BlogPad - I-WordPress Editor ye-iPad
Ekugqibeleni ndifumene umhleli ondiwanelisayo kwi-iPad. Nangona ube yiWindowsPress iqonga elikhulu lokubloga, apho kukho iikhompyutheni kunye nezicwangciso eziphezulu zekhwalithi, ubunzima bokufumana umhleli omhle bekusoloko kunengxaki. Kwidesksi ndiyakwazi ukufumana into. Ndizama iBlogPress, i-WordPress ye-iOS, i-Blog Docs, ...
I-CartoDB yenye yezona zicelo ezinomdla kakhulu eziphuhlisiwe ekudalweni kweemephu ze-intanethi, ezimibalabala ngexesha elifutshane kakhulu. Ukunyuka kwi-PostGIS ne-PostgreSQL, ukulungele ukuyisebenzisa, yenye yeyona nto ibhetele endiyibonayo ... kwaye leyo yindlela yokuqala yaseSpain, idibanisa ixabiso. IiFomathi ezixhasa ukuba nophuhliso olugxilwe ...
I-Karmacracy, enye yezona zixhobo ezinobungcono kwiiblogi nakwiinkonzo zentlalo
Abo banablogi, iphepha le-Facebook okanye i-akhawunti ye-Twitter banokuzibuza yona le mibuzo: Bangaphi ukutyelelwa okuvela kwenye yam Tweets? Zingaphi iindwendwe ezifikile kwiyure yokuqala emva kokuba ndithumele ikhonkco kwiphepha le-Facebook? Indlela yokucwangcisa iTweet namhlanje namhlanje kwi10: 35 ye ...
I-15 akhawunti ye-Twitter ukulandela ... ngonyaka kamva
Unyaka emva kokubeka iliso i-akhawunti ye-Twitter ye-15, senze ukuhlaziywa kwinto eyenzekayo. Isatshati alibandakanyi ii-akhawunti ezimbini zokuqala, kuba izinga labo lokufikelela lichaphazela ukubonakala okuthelekiswayo. Iingxelo ezimbini azizange zibuyele ebomini, nangona kubaluleka ngexesha lokuthelekiswa kokuqala. Ukuze ...
Page 1 Page 2 Page 3 ... Page 12 kwiphepha elilandelayo